KA BOGO: Rikoodhadii laga diiwaan galiyay kulankii uu xulka Portugal ugu soo gudbay wareega 8-da ee EURO 2016… (Nani oo 100 buuxsaday!) – Gool FM
Haaruun June 25, 2016
(Paris) 26 Juunyo 2016 – Aqriste waxaan halkan kugu heynaa rikoodhadii laga diiwaan galiyay kulankii uu xulka Portugal 1-0 uga adkaaday waqtigii dheeriga ahaa Croatia, uguna gudbay wareega siddeed dhammaadka ee Euro 2016.
>- Xulka Portugal ayaa gaaray siddeed dhammaanka Euro lix jeer, waana in ka badan xulalka kale.
>- Ricardo Quaresma ayaa dhaliyey goolkii ugu horreeyey ee la dhaliyey waqtiga dheeriga ah (Extra time) tartanka Euro, tan iyo Andrey Arshavin oo sanadkii 2008 ka dhaliyey xulka Netherlands.
>- Cristiano Ronaldo ayaa ku guuldarreystay inuu gool dhaliyo kulankan, haddii uu dhalin lahaa waxa uu sidaasi ku noqon lahaa xiddiga ugu goolasha badan taariikhda tartanka Euro, isagoo min 9 gool la wadaagi lahaa Michel Platini.
>- Cristiano Ronaldo ayaa kaliya 19 mar kubadda taabtay qeybta hore kulankan ay la ciyaareen Croatia, iyadoo hal marna uusan kubadda ku dhex taaban xerada ganaaxa ee uu weerarka ku ahaa.
>- Xulka Croatia ayaa ku guuldarreystay inuu gool dhaliyo qeybta hore ee ciyaarta markii ugu horreysay tartankan Euro 2016.
>- Xulka Portugal ayaa guul gaaray dhammaan saddexdii kulan ee uu la ciyaaray Croatia kulankaan ka hor isagoo lix gool ka dhaliyey, isla markaana aan gool laga dhalin.
>- Xulka Croatia ayaa hal mar kaliya laga adkaaday 10-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaareen tartammada Yurub, 6 guul ayey gaareen, saddexna barbaro ayey galeen.
>- Pepe ayaa madaxeeyey shuutkii ugu horreeyey Portugal ee kulankan kaddib 24 daqiiqo iyo 40 ilbiriqsi oo ciyaartu ay socotay.
>- Nani ayaa kulankiisii 100-aad u saftay xulkiisa Portugal.
>- Nani waxa uu noqday ciyaaryahankii afaraad ee Portuguese oo xulkiisa u safta 100 kulan, kaddib Ronaldo, Figo iyo Couto.
Wakiilkiisa waxa uu hore u SHIDAY wararka Neymar la xiriirinaya ka tagida Barcelona isaga oo xaqiijiyey in saddex koox ay dalabyo diyaar la yihiin balse hada Aabihiis ayaa isna hadlay...Muxuu yiri?
HAMBALYO UNAI EMERY! Wenger oo is yiri marxabee tababaraha la filayo in uu xagaaga ku biiro PSG balse dhacdadan la yaabka leh ayuu la kulmay....Maxay tahay?